के एमाओवादीमा ल्यारकाल प्रचण्डका मात्रै प्यारा हुन् ? – Kathmandutoday.com
के एमाओवादीमा ल्यारकाल प्रचण्डका मात्रै प्यारा हुन् ?
काठमाण्डु टुडे २०७१ माघ २६ गते ११:१७ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २६ माघ– आइतबार निर्वाचन आयोगले एमाओवादीको सिफारिसमा ल्यारकाल लामालाई सभासद निर्वाचित गरेपछि एमाओवादीको निर्णयमाथि सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ तर माओवादी नेतृत्व मौन छ । माओवादी नेताका फेसबुक र ट्वीटरमा अभिव्यक्त असन्तुष्टिले ल्यारकाल लामालाई सभासद बनाउने निर्णय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक्लै गरेको जनाउँछ ।
फेसबुक र ट्वीटरमा सबैभन्दा बढी सक्रिय मानिने एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ल्यारकाल लामाबारे केही बोलिरहेका छैनन् । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले भने ल्यारकाल प्रकरणको उल्लेख नगरीकन असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘कस्तो असहज परिस्थिति ? गम्भीर असहमति छ त्यस निर्णयप्रति र नैतिक जिम्मेवारी कसरी लिने ? यस्तो कहिलेसम्म चलिरहने हो ? यो नियति फेरिनैपर्छ ।’
श्रेष्ठले ल्यारकाल प्रकरणको भने उल्लेख गरेका छैनन् ।
एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य आहुतिले भने आइतबार साँझै फेसबुकमा लेखे, ‘टाउको फुटाएर गल्ती सच्याउन चाहन्छु, घाउको चिन्ता छैन लारक्यालले उपचार गरिदिनेछन् (मिस्टर योद्दा ।’
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई दिनअघि मात्रै टाउको फुटाएर विगतका गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
आहुतिले बितिसकेका पूर्वउपाध्यक्ष पोस्टबहादुर बोगटी ‘दिवाकर’लाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्– ‘तिमी भन्थ्यौ, ‘दुइटा हात्ती मिले पनि नमिले पनि तोरी बारी ध्वस्त पार्छन् !’ तर यसपाली तिम्रो यो आरोपलाई छल्न होला सायद हात्तीहरूले मिलेर तोरीबारीतिर ध्यानै दिएनन् बरू मिस्टर माननीय लारक्याललाई पो जन्म दिए ! तिमी पनि छक्क हामी पनि छक्क !!’
अर्का केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाले आइतबारै ट्वीट गरेका छन्, ‘पार्टी केस बैठक जारी छ सभासदबरे एजेन्डा छैन फेरि हाम्रोमा संघर्षबारे छलफल हुन्छ, पद प्रतिष्ठामा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छ ।’
देवकोटाले ट्वीटले सभासद बनाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डको एक्लो निर्णय भएको बुझाउँछ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, पोलिट्ब्युरो सदस्य आहुति र केन्द्रीय सदस्य देवकोटाको फेसबुक स्टाटस हेर्दा ल्यारकाललाई सभासद बनाउने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिबाट पारित नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।